DEG-DEG: Pierre Emerick-Aubameyang Oo Ka Degay Barcelona - GOOL24.NET
DEG-DEG: Pierre Emerick-Aubameyang Oo Ka Degay Barcelona
Weeraryahanka reer Gabon ee Pierre Emerick-Aubameyang ayaa hadda ka degay magaalada Barcelona oo uu tijaabada caafimaadka ugu marayo kooxda kubadda cagta Barcelona oo uu heshiis amaah ah ugu wareegayo.
Kabtanka hore ee Arsenal ayaa shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee kooxdiisa uu tababare Mikel Arteta ka saaray liiskiisa, isaga oo ka xayuubiyey kabtanimada, kaddib markii uu ku eedeeyey in uu jabiyey anshaxa iyo shuruucda naadiga.
Laacibkan oo bishii bishan January aan hal mar kasoo muuqanin Arsenal isla markaana uu xumaaday xidhiidhka uu la leeyahay Mikel Arteta ayaa lala xidhidhinayay dhawr kooxood oo ay ka mid yihiin Juventus, PSG iyo Barcelona.
Warbaahinta Spain ayaa hore u sheegtay, in Pierre-Emerick Aubameyang uu doonayo inuu u ciyaaro Barcelona, laakiin waxay dhibaato ka taagnayd cidda bixinaysa mushaharkiisa xad-dhaafka ah oo aanay kooxda reer Spain awoodi karayn.
Pierre-Emerick Aubameyang oo toddobaadkii qaata mushahar dhan 350,000 Gini ayaa ahaa caqabadda ugu weyn ee shakiga gelinaysay inuu tago Camp Nou, hase yeeshee arrintaas ayaa hadda u muuqata in meel la isla dhigay.
Sida ay xaqiijiyeen wariyeyaasha xogta ciyaaraha looga dambeeyo ee Fabrizio Romano iyo Gerard Romero, Aubameyang ayaa mar dhoweyd gaadhay magaalada waddanka Spain oo uu tijaabada caafimaadka ugu marayo Barcelona, waxaana uu qalinka ku duugi doonaa heshiis amaah illaa dhamaadka xilli ciyaareedka ah.
Pierre Emerick-Aubameyang ayaa noqonaya ciyaartoygii afraad ee Barcelona ay la saxeexato bishan January, waxaanaka horreeyey Dani Alves, Ferran Torres iyo Adama Troare.